Ny mombamomba ny orinasa - Weifang Dehua New Polymer Material Co.,ltd.
Weifang Dehua New Polymer Material Co., Ltd dia naorina tamin'ny taona 1999, izay orinasa simika matihanina lehibe miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao avo lenta ary fanamarinana ny ISO 9001 tamin'ny 2002.Ny foibem-pikarohana ambony indrindra sy ny ekipan'ny fitantanana ary ny toeram-pitsapana dia hanampy amin'ny fanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa amin'ny fomba marina sy haingana.
Ny famatsiana ny akora simika avo lenta sy maitso ho an'ny tontolo iainana sy ny fiainantsika ara-dalàna ho an'ny mpanjifantsika dia ny tranon'ny orinasa iray.Dehua dia tsy mifantoka amin'ny tsena amin'ny sambo na iraisam-pirenena ihany.
Ny kalitao dia ny fikatsahana lalandava nataon'i Dehua, ny asa be pitsiny ary ny fisafoana famakafakana lamandy dia hampiseho ny lavorary amin'ny mpanjifantsika rehetra.Amin'ny fianarana ny teoria sy ny teknika mandroso dia hanampy antsika hanatsara ny haavon'ny teknika sy ny fanavaozana ataontsika.
Ho fampifanarahana amin'ny tontolon'ny tsena mifaninana sy hifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa, dia niara-niasa tamin'ny oniversite sy ivon-toeram-pikarohana momba ny indostria izahay mba hanavao ny zavatra simikay isan-taona.Ny fingotra vita amin'ny chlorinated novokarin'ny dingana Aqueous dia naondrana tany amin'ny firenena 30 mahery eran'izao tontolo izao ary ampiasaina betsaka amin'ny loko an-dranomasina, loko anticorrosion ary loko marika marika, sary hosodoko amin'ny seranam-piaramanidina sns.
Specialized amin'ny vokatra simika toy ny manaraka
Ny PVC Stablizers , CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride), HCPE (High Chlorinated Polyethlene), CPE (Chlorinated Polyethylene), CR (Chlorinated Rubber), Acrylic Processing Aid (ACR), Acrylic Impact Modifier (AIM), AS Resin TR869, Spray Elastomer(SPUA), metaly loko emulsion, fitaratra loko emulsion, hazo lacquer emulsion, plastika sy fingotra loko emulsion, elastika Anti Fifandona fitaovana, vy rafitra Anticorrosion akora, elastika tsy tantera-drano akora, Quick Reactive Spray Polyurea Floor Material.
Ny hevitray maitso maitso
Ny tsirairay amin'ireo andian-dahatsoratra etsy ambony ireo dia manana naoty maromaro miankina amin'ny mpanjifa samihafa ary azo ampiasaina amin'ny ranomainty sy ny sisa, ny fizotran'ny chlorinated aqueous phased suspension dia tsy mampidi-doza ho an'ny natiora sy ny tontolo iainana. Nampiasa rano izy io ho toy ny fitaovana fanehoan-kevitra fa tsy ranon-javatra misy poizina toy ny carbon tetrachloride ,trichloromethane ary dichloromethane .Noho izany, ity dingana ity dia tsy manimba ny sosona ozone amin'ny atmosfera. Ity dingana ity dia tsy misy singa misy poizina toy ny carbon tetrachloride. Amin'ny ezaka ataontsika, ny kalitaon'ny akora simika dia mihoatra ny vokatra nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny solvent, miaraka amin'ny tahan'ny vidin'ny fifaninanana kokoa.
Ny fandrosoana sy ny fanavaozana ary ny fikarohana vokatra vaovao ho an'ny tontolo iainana maharitra sy ny fiainana tanàna maitso no tanjonay mandritra ny fotoana maharitra.